Tallaabooyinka Caddaalad-darrada Komishanka Doorashooyinka ee ku gedaaman | Somaliland.Org
Tallaabooyinka Caddaalad-darrada Komishanka Doorashooyinka ee ku gedaaman
March 27, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org )-Guddida Doorashooyinka Somaliland, ayaa dhawaanahan qaaday tallaabooyin horseed u noqon kara Musuq-maasuq hor leh iyo in ay cagta saaraan Jidka Guddidii iyaga ka horreeyay iyo sidoo kale caddaalad-darro la xidhiidha arrimahooda Shaqo.
Tan iyo intii ay si rasmi ah u hawl-galeen Guddida Doorashadu, isla markaana ay kalsooni taam ah ka hanteen Axsaabta Mucaaradka ah, inkasta oo ay hawlaha shaqo ee loo igmaday wax ka dhaqaajiyeen, hadana waxay dhawaanahan qaadeen tallaabooyin u muuqda hordhaca Musuqmaasuq ay maaggan yihiin, ka dib markii 7-da xubnood ee Guddida Doorashadu Lacagayow si hoose heshiis ugula galeen inay siiyaan xubno iyo shaqsiyaad ka kala tirsan Hay’adaha qaarkood. Inkasta oo aanay arrintan si toos ah uga hadal dhinacyada ay khusayso, haddana siday sheegayaan ilo-wareedyo xog-ogaal u ah Guddida Doorashadu, bixinta Lacagayowgan oo kaliya maaha arrimaha horseedka ka noqon kara inay guddidu ku dambayso jidkii ay mareen guddidii hore. Hase ahaatee, waxa jira arrimo kale oo la hal-maala kuwan kor aynu ku sheegnay.
Guddida Doorashada oo kaashanaya Hay’adda Interpeace waxay dhawaan mid ka mid ah dalalka deriska la ah Somaliland u qaadi doonaan qaar ka mid ah Warbaahinta dalka, halkaas oo loogu soo tababari doono arrimo la xidhiidha Doorashooyinka, hase ahaatee, waxa gebi ahaanba tababarkaas laga reebay Shabakadaha ama mareegaha Wararka ee Internet-ka, kuwaas oo laf-dhabar u ah isku-xidhka Wararka Bulshada iyo Hay’adaha ay hawlaha Qaranka u igmadeen iyo sidoo kale dhacdooyinka dalka hooyo iyo dunidaba.
Ururka Mareegaha Wararka Internet-ka (Websites) ee Somaliland (Somaliland Online Association – SOA), ayaa si ba’an u cambaareeyay tallaabada Shabakadaha Wararka lagaga reebay tababarkaas, waxaanay ku tilmaameen mid haddii aan wax laga qaban wax u dhimi karta wada-shaqaynta Guddida Doorashooyinka iyo Shabakadaha Wararka Somaliland ka hawl-gala.
Dhinaca kale, xogaha soo baxayaa waxay sheegayaan oo kale in dhammaan xubnaha Guddida Doorashadu ay iibsadeen Gaadiid cusub oo aan ahayn gaadiidkii shaqada ay u adeegsan jireen xubnihii Komishanka ee iyaga ka horreeyay, kuwaas oo ilaa hadda aan laga war qabin habka ay u shaqeeyaan iyo cidda ku shaqaysa.
Previous PostShirkaddii la siiyay Qandaraaska Kaadhadhka cusub ee codaynta oo Xogtii u qaadday Koonfur-AfrikaNext PostXukuumadda Somaliland oo ka hadashay sababta hortaagan in Jabuuti Xafiis Ganacsi ka furato dalka	Blog